Maamulka Puntland oo sheegay inaysan ka qaybgalayn Shirka ka dhacaya Magaalada Kismaayo. – Balcad.com Teyteyleey
Maamulka Puntland oo sheegay inaysan ka qaybgalayn Shirka ka dhacaya Magaalada Kismaayo.
Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Puntland C/Xakiin Cumar Camey ayaa shaaca ka qaaday maanta inaysan Puntland ka qeyb gali doonin shir uu madaxweynaha Jubbaland uu ku dhawaaqay, kaasi oo ay yeelan lahaayeen Maamul Gobaleedyada, kaasi oo ka dhici lahaa magaalada Ksmaayo ee Gbalka Jubada hoose.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa sheegay in maamulkiisa ay ka soo horjeesteen shirkaasi ka dhacaya magaalada Kismaayo, Islamarkaana aysan jirin cid Puntland ku matali karta oo tagi karta Shirkaasi Kismaayo ka dhacaya.
Shirka Maamul gobaleedyada ayaa lagu waday inay ka shiraasi kaga hadlaan Xiisada Khaliijka iyo Mowqifka ay ka qaateen Maamul gobaleedyada Arintaas, maadaama Dowlada Dhexe ay Horey u Sheegtay inay Dhex dhexaad ka Tahay khilaafka u dhexeeya Wadamada Khaliijka.
Dhanka kale lama oga ilaa iyo hadda go’aanka ay qaadan Doonaan Maamul gobaleedyada kale sida K/Galbeed, Hirshabelle iyo Galmudug, maadaama Puntland ay ka soo horjeesatay shirka ka dhacaya Magaalada Kismaayo.
The post Maamulka Puntland oo sheegay inaysan ka qaybgalayn Shirka ka dhacaya Magaalada Kismaayo. appeared first on Ilwareed Online.
Weerar Madaafiic ah oo Al-Shabaab iyo Ciidamada Itoobiya isku weydaarsadeen Degmada Diinsoor.
Waa kuma Ninkii ka dambeeyay Weerarkii Las Vegas ?